HUIZI လက်သည်းစတစ်ကာများနှင့် လက်သည်းထုပ်များနှင့် ဂျယ်လက်သည်းခွံများ ထုတ်လုပ်သူ-ကုန်ပစ္စည်းများ-ရှန်ဟိုင်း HUIZI ဒစ်ဂျစ်တယ်
HUIZI လက်သည်းစတစ်ကာများနှင့် လက်သည်းထုပ်များနှင့် ဂျယ်လက်သည်းခွံများ ထုတ်လုပ်သူ
အရေအတွက် (အပိုင်းအစများ) 200- 1000
အချိန် - အချိန် (ရက်များ)
စိတ်ကြိုက်လိုဂို (Min.Order: 1500 Pieces)
စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုး (Min.Order: 1500 Pieces)
ဂရပ်ဖစ်စိတ်ကြိုက် (Min.Order: 1500 Pieces)
semi-ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သောဂျယ်လက်သည်းစတစ်ကာ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မီးဖိုနှင့် Gel စတစ်ကာ
လေဟာနယ်အိတ်ထုပ်ပိုးခြင်း, 20strips / PC, 1PC / အိတ်
Gel Nail Kit ၏ အားသာချက်များ
1. ဘေးကင်းမှု (Gel Nail strips များသည် စစ်မှန်သော ဂျယ်လ်လက်သည်းများနှင့် အလှကုန် ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်)
2. ပျက်စီးခြင်းမရှိပါ (လက်သည်းများပိုမိုပါးလွှာမည်မဟုတ်ပါ၊ သင်၏မူလလက်သည်းများကိုပြန်ပေး)
3. အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားရန် (အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားရန် သစ်သားချောင်းငယ်ကို အသုံးပြုပါ)
4. အဝတ်အစား၊ အိတ်များနှင့် အခြားအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို အလွယ်တကူ လိုက်ဖက်ပါ။
5. အချိန်ကုန်ပါ (၁၅ မိနစ်လောက်တော့ လှပတဲ့ Gel Nail အသစ်ကို ပြီးမြောက်စေမှာပါ)
1.Gel လက်သည်းများသည် သာမန်ပလပ်စတစ်လက်သည်းစတစ်ကာများမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့ကို ဂျယ်လက်သည်းပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် မီးထွန်းပြီးနောက် ပိုမိုတောက်ပကာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှုတို့ဖြစ်သည်။
2.Gel လက်သည်းစတစ်ကာများ အားလုံးတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးသည်။
3.Gel nail wraps များသည် self-adhesive ဖြစ်ပြီး လက်သည်းပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ကပ်နိုင်သည်။
4.Gel လက်သည်းစတစ်ကာသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုနှင့် အိမ်သုံးအတွက် သင့်လျော်သည်။
လက်သည်းခြုံ - ခရစ္စမတ်
Shanghai Huizi အလှကုန်ကုမ္ပဏီသည် 2010 ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားပြီး လက်သည်းခြေသည်း သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် လက်သည်းဆိုးခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသန၊ ဒီဇိုင်း၊ ODM နှင့် OEM တို့ကို အာရုံစိုက်ပြီး 11 နှစ်ကျော်တွင် ဤနယ်ပယ်တွင် လွတ်လပ်သောဉာဏမူပိုင်ခွင့်များရှိသည်။ မူရင်းထုတ်ကုန်များတွင် လက်သည်းစတစ်ကာ၊ ခြေသည်းစတစ်ကာ၊ ကလေးလက်သည်းစတစ်ကာနှင့် အခြားလက်သည်းခြေသည်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ထုတ်ကုန်များ ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် 6000 စတုရန်းမီတာရှိသော အလှကုန်ထုတ်လုပ်ရေး သန့်စင်ရေးစင်တာ၊ ဂျာမန်4ရောင်စုံပုံနှိပ်စက်၊ ထိုင်ဝမ်အလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်၊ ထိုင်ဝမ်အလိုအလျောက်ကြိတ်ခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၊ ဂျပန်တိကျဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများကိုမိတ်ဆက်ခြင်း။ ကုမ္ပဏီသည် BSCI လူမှုတာဝန်ယူမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ISO9001 အရည်အသွေးစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ထုတ်ကုန်များ SGS လက်မှတ်၊ FDA လက်မှတ်ရရှိထားပြီး၊ အမေရိကန်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အလှကုန်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျပန်၊ အမေရိကန်၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ တောင်ကိုရီးယားစသည်ဖြင့် နိုင်ငံပေါင်း 40 ကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပို့ဆောင်မှုစွမ်းရည်၊ သင်ဘယ်နေရာကနေမဆို သင်ခံစားနိုင်မှာပါ။
အရောင်းရဆုံးခရစ်စမတ်စုဆောင်းမှု 100% လက်သည်းဆိုးဆေးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းလက်သည်းခွံလက်သည်း
စက်ရုံစျေးနှုန်းများစိတ်ကြိုက် Gel Shinning လက်သည်းဆိုးဆေး၊ လက်သည်းစတစ်ကာ
Gel Nail Wraps လက်ကားစက်ရုံ စျေးနှုန်း HUIZI semicured gel လက်သည်းစတစ်ကာ
အသစ်ရောက်ရှိလာသောစိတ်ကြိုက်အနုပညာအလှဆင်လက်ချောင်းလက်ဖြင့်ထုပ်ထားသော Hui Zi အရည်အသွေးမြင့်လက်သည်းစတစ်ကာများ